Huwandu hweVanhu Vari Kubayiwa Nhomba Hwava Kukwira
Victoria Falls Covid-19 Vaccination Woman
Hurumende inoti vanhu vakwanda munyika vave kuenda kunobaiwa majekiseni ekudzivirira chirwere cheCovid-19 uye inoti zviri kune veruzhinji kuti vatsigire chirongwa chekuti munhu wese abayiwe nhomba.
Kunyange hazvo vashandi vehutano, vashandi vehurumende pamwe neveruzhinji vakambozeza kubaiwa nhomba yekudzivirira Covid-19, zvinhu zvachinja uye vakawanda vave kubaiwa nhomba iyi.
Kuzvipatara zvakaita seParirenyatwa neWilkins uko kuri kubaiwa vanhu kwave nemitsetse yakareba yevanhu vari kubaiwa nhomba iyi.
Makirinika akawanda ekanzura muHarare avewo kubaya vanhu nhomba iyi uye Studio 7 nhasi yaona vanhu vakawanda vachibaiwa nhomba iyi mumisha inogara vazhinji yakaita seMufakose neMbare.
Mumwe abayiwa nhasi, VaHunidzarira Dongo, vati vaona zvakakodzera kuti vazvidzirire kubva kudenda iri uye vakanzwa nezvechirongwa icho panhepfenyuro yeStudio 7.
Mukuru anoona nezvedenda reCovid-19, mumahofisi emutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, Doctor Agnes Mahomva, vati vanofara nezviri kuitika uye izvi zvinotevera zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvekushambadza chirongwa chekudzivirira kupararira kweCovid 19.
Vati zvirongwa izvi zvinosanganisira kubaiwa kwakaitwa VaMnangagwa nemutevedzeri wavo, VaConstantine Chiwenga, kushambadzwa kuri kuitwa nebazi rekuburitswa kwemashoko pamwe nezviri kuitwa nemakambani akaita seZimpost iyo yakaparura masitembi ane chekuita neCovid-19 nemusi wechitatu.
Dr Mahomva vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kuti munhu wese anoda nhomba yeCovid-19 abaiwe uye vati zvasarira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba iyi.
Mashoko aDr Mahomva anouya mushure mekunge gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vakazivisa nezuro kuti hurumende yakaunganidza zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica ekutenga nhomba dzekudzivirira Covid-19.
VaNcube vakati hurumende ichatenga nhomba miriyoni pamwedzi wega wega kudzamara vanhu mamiriyoni gumi vabaiwa.
Vaimbove gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr Henry Madzorera, vati ichokwadi kuti huwandu hwevanhu vari kubaiwa hwakwira vachiti veruzhinji vave kuona kuti hapana dzambudziko rakawira vanhu vakabaiwa nhomba iyi pakutanga.
VaMadzorera vatiwo unogona kuva mutoro mukuru kuti hurumende ibate chinangwa chayo chekubaya vanhu mamiriyoni gumi.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira, Dr Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti vanhu vave kutambira nhomba yeCovid-19.
Kunyange hazvo hurumende yakati makambani nemasangano akazvimirira anokwanisa kutenga nhomba achishandisa bazi rezvemari, Dr Madzorera vati havaone chikonzero chekuti makambani kana masangano akazvimirira aiite izvi kana hurumende iri kubaya vanhu nhomba iyi pachena.
Kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira, dzimwe nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti Zimbabwe inofanirwa kubaya vanhu zviuru makumi matatu nezvitatu, 33 000 pazuva kuitira kuti ikwanise kubaya miriyoni imwe chete yevanhu pamwedzi wega wega kwemwedzi gumi inotevera kuitira kuti inge yakwanisa kubaya vanhu mamiriyoni gumi.
Kusvika nezuro vanhu zviuru makumi masere nezvinomwe nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 87 791, vange vabaiwa nhomba yekutanga uye vanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana mashanu negumi nevatanhatu,17 516, vange vabaiwa nhomba yepiri.
Pari zvino Zimbabwe yakapa mvumo yekuti munyika mushandiswe nhomba ina dzinoti Sinopharm neSinovac dzekuChina, Covaxin yekuIndia neSputnik V yekuRussia.
Nhomba dzave munyika iSinopharm, Sinovac neCovaxin.